ပိုပြီးကျေးဇူးမတင်သင့်ဘူးလား ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 1:26 PM | No မှတ်ချက် |
ကောင်မလေးတစ်ယောက် သူ့ အမေနဲ့ အကြီးအကျယ် ရန်ဖြစ်ပြီး အိမ်ပေါ်ကနေ ပြေးဆင်းသွားတယ်။
ဒီအိမ်ကိုလုံးဝပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူ အပြင်မှာ တနေကုန် လျှောက်သွားနေတာ ဗိုက်ကလဲ ဂလုဂလု မြည်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့သူ ပိုက်ဆံမပါဘဲ ထွက်လာခဲ့တာ၊ အိမ်ပြန်ပြီးထမင်းစားဖို့ မျက်နှာလဲ မရှိတော့ဘူး။
ညရောက်တော့ သူခေါက်ဆွဲဆိုင်တဆိုင်နား ရောက်လာခဲ့တယ်… ခေါက်ဆွဲအနံ့ကလဲ မွှေးကြိုင်နေတော့ တစ်ပွဲလောက်စားချင်စိတ်ကအရမ်းကိုပြင်းပြနေတယ်။ ပိုက်ဆံပါမလာတော့ တံတွေးကိုဘဲပြန်ပြန် မျိူချနေရတာပေါ့။
ရုတ်တရက် ခေါက်ဆွဲဆိုင် ပိုင်ရှင်က “သမီး ခေါက်ဆွဲစားမလို့လား” လို့ မေးတော့ သူကလဲ ရှက်ရှက်နဲ့ “အင်း… ဒါပေမဲ့ သမီးမှာ ပိုက်ဆံမပါလာဘူး” လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလဲ “ရတယ်။ ဒီနေ့ ငါကျွေးတာလို့ဘဲ ထားလိုက်ပါတော့” လို့ပြောလိုက်တယ်။ မိန်းကလေးကလဲ ကိုယ့်နားကိုတောင် မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ထဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။
မကြာခင်မှာဘဲ ခေါက်ဆွဲ ရောက်လာပြီးသူ မြိန်ရည် ရှက်ရည် စားပြီး
“ဦးလေး က အရမ်းသဘောကောင်းတာဘဲ”လို့ ပြောလိုက်တယ်။
သူက “ဟုတ်တယ်လေ၊ သမီးတို့ တခါမှ မတွေ့ဖူးဘဲနဲ့ ဦးလေးက သမီးပေါ် ဒီလောက်ကောင်းတာ၊ သမီးမေမေနဲ့ မတူဘူး၊ သမီးဘာလိုချင်လဲ ဘယ်လိုစဉ်းစားနေတာလဲဆိုတာကို နားမလဲပေးနိုင်ဘူး။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ရယ်ပြီးပြန်ပြောတယ် “သမီးလေး… ငါက နင့်ကို ခေါက်ဆွဲလေးတစ်ပွဲကျွေးရုံနဲ့ နင်ငါ့ကို အဲလောက်ကျေးဇူးတင်နေ… နင့်အမေက နင့်ကို အနှစ် ၂၀ ကျော်ထမင်းချက်ကျွေးလာတာ နင်သူ့ကို ပိုပြီးကျေးဇူးမတင်သင့်ဘူးလား?”
ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာ ကောင်မလေးဟာ အိပ်မက်ထဲက နိုးလာသလို သဘောပေါက်ပြီး မျက်ရည်များစီးကျလာတယ်။ ကျန်နေသေးတဲ့ ခေါက်ဆွဲကိုဆက်မစားနိုင်တော့ဘဲ အိမ်ကို ပြန်ပြေးခဲ့တယ်။
အိမ်ရှေ့လမ်းထိပ်ရောက်တော့ သူ့မေမေဟာ ပူပန်သောကများစွာနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ မျှော်နေတာကို အဝေးကနေလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ထောင်သောင်းမကသော တောင်ပန်းစကားတွေ လှိုက်ဖိုနေတယ်။ ပါးစပ်ဟဖို့ အချိန်တောင်မရလိုက်ဘူး။ သူ့မေမေက ပြေးလာပြီးတော့“တနေကုန် ဘယ်တွေသွားနေတာလဲ? ငါ့မှာ စိတ်ပူလိုက်ရတာ။ လာ… လက်ဆေးပြီး ထမင်းစားတော့” လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ မိန်းကလေးဟာ မိခင်ရဲ့မေတ္တာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံစားမိပြီး မျက်ရည်တွေဟာရေလှိုင်းလိုကျလာတယ်။
အမြဲတမ်း သင့်ကို စောင့်ရှောက်ဂရုစိုက်နေတဲ့ သူကို တော့ သင်ကတော့ ဘာမှမဟုတ်သလိုဘဲ။ သူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်ကများ ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းပြလိုက်ရင် ဒီလူဟာအရမ်းကို ကောင်းတဲ့လူ လို့ထင်မိလိမ့်မယ်။
အမြဲတမ်း သင့် အပေါ်မှာကောင်းနေတာဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဒါဟာ အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်။ နောက်အကျင့် ကနေ ဒါဟာလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာဖြစ်သွားရော။ ဒီတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဂရုစိုက်မှုလျော့သွားတာနဲ့ သင်ဟာ စပြီး မကျေနပ်တော့ဘူး။
အမှန်တကယ်တော့ ဂရုစိုက်မှုတွေလျော့သွားတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာ ပိုများလာလို့ပါဘဲ။
ရယူမှုကို အကျင့်ပါသွားပြီးတဲ့နောက် ကျေးဇူးသိတတ်မှုတွေကို မေ့လျော့နေတတ်ကြတယ် ။